RASMI: Barcelona oo ku dhawaaqday in mid ka mid ah xiddigaheeda uu ku biiray koox cusub – Gool FM
RASMI: Barcelona oo ku dhawaaqday in mid ka mid ah xiddigaheeda uu ku biiray koox cusub
(Barcelona) 02 Sebt 2019. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo ku dhawaaqday in mid ka mid ah xiddigaheeda uu ku biiray koox cusub.
Barcelona ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday inuu ka tagay xiddigeeda Rafinha Alcântara, kaasoo heshiis amaah ee hal xili ciyaareed ah ugu biiray naadiga Celta Vigo.
Kooxda Barcelona ayaa war rasmi ah ay ku shaacisay website-keeda iyo dhamaan boggaga ay ku leedahay baraha bulshada ee sida Facebook iyo Twitter waxay ku xaqiijisay in Rafinha Alcântara uu ku biiray Celta Vigo.
Barcelona ayaa sidoo kale ku dhawaaqday in Rafinha Alcântara uu cusbooneysiiyay qandaraaskiisa kooxda Barca, kahor inta uusan qaab amaah ah ugu wareegin kooxda Celta Vigo.
Rafinha Alcântara ayaa raadinaya fursad uu kaga ciyaaro meel ka baxsan Barcelona xili ciyaareedkan, kaddib markii ay naadiga reer Catalonia ku guuleysatay in khadkeeda dhexe ay ku soo xoojisato xiddiga reer Holland ee Frenkie de Jong.
Rafinha ayaa kooxda Barcelona ka tagay bishii Janaayo 2018 isagoo qaab amaah ahaan ugu wareegay naadiga Inter Milan, laakiin Nerazzurri ma asyan dhameystirin qandaraaskiisa, kaddib marka uu dhamaaday waqtigii amaahda ahaa.
RASMI: Kooxda Paris Saint-Germain oo shaacisay inay dhameystirtay heshiiska Keylor Navas